पर्थमा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मार्केटिङ्ग ट्रेनिङ्ग सम्पन्न | Namaste Nepal Australia
Home All Posts पर्थमा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मार्केटिङ्ग ट्रेनिङ्ग सम्पन्न
Posted By: Aashish Kajion: January 16, 2017 In: All Posts, Perth News
जनवरी १४, २०१७ शनिवारको दिन गभर्नर अफ पश्चिम अस्ट्रेलिया अफिस अफ मल्टिकल्चरले आयोजना गरेको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मार्केटिङ्ग ट्रेनिङ्ग मा एन.आर.एन.ए. पश्चिम अस्ट्रेलियाको पहलमा नेपाली समुदायको तर्फ बाट ४ जना सहभागी भएका थिए ।
सो सेमिनारमा भाग लिन चाहनेहरुका लागि एन.आर.एन.ए. पश्चिम अस्ट्रेलियाले सूचना जारि गरेको थियो । जस अनुरुप अनुरुप पर्थको नेपाली समुदायबाट चार जनाले भाग लिनु भएको थियो। उक्त सेमिनारमा छुट्टा छुटै देश बाट करिब एक दर्जन कम्युनिटि ग्रुपका प्रतिनिधिहरुले भाग लिएका थिए । बिहान ९ बजे बाट दिउसो ४;३० बजेसम्म चलेको सो कार्यक्रम पर्थको गभर्नर हलमा भएको थियो ।
जो कसैले पनि आयोजना गर्ने सबै प्रकारका इभेन्टहरु कसरि सन्चाल गर्ने र कुनै पनि इभेन्टलाइ सफल बनाउन कुन कुन कुरामा ध्यान गर्नु पर्छ र कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा आधारित थियो।
नमस्ते नेपाल संग कुरा गर्दै एन आर एन पश्चिम अस्ट्रेलियाका सचिव शैलेश मैनालीले भन्नुभयो एन.आर.एन. पश्चिम अस्ट्रेलियाले आगामी दिनमा लोकल गभरमेन्ट संगको सहकार्य मा अझ धेरै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नेछ र त्यस प्रकारका कार्यक्रम बाट नेपाली समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभावान्वित हुनेछन ।